VoiceBunny: Ìgwè na-atụgharị uche Ọkachamara Voiceovers | Martech Zone
VoiceBunny: Igwe Ọdụdọ Ndị Ọkachamara
Monday, September 10, 2012 Sọnde, Septemba 9, 2012 Douglas Karr
Amaghị m ihe kpatara na onye ọ bụla ga-agbanye igwe okwu laptọọpụ ha wee rụọ ọrụ dị egwu na-ekwupụta vidiyo vidiyo ma ọ bụ egwu egwu maka azụmahịa ha. Gbakwunye ọkachamara ọkachamara na ụda olu adịghị ọnụ, ọ dị mfe ma talent ndị dị ebe ahụ dị ịtụnanya.
Anyị nwere na nso nso a Cunningham bara ọgaranya mee olu anyị maka mmepụta vidiyo ọrụ anyị rụrụ maka Zmags. Na nke anyi ahịa Podcast mgbasa ozi, intro na outro ka ndị ọkachamara ama na mpaghara Paul Nwogu. Nwanyị Pọl na-arụkwa ọrụ olu!
O nwere ike ị gaghị enwe ọtụtụ onyinye na akuku, yabụ kedu ka ị ga - esi chọta ma nweta olu maka ikike maka ọrụ ọzọ ị ga - abịa? VoiceBunny na-enwe olileanya ịgbanwe nke ahụ site na ịpịgharị ụda olu ndị ọkachamara.
Niile talent nwere ọkachamara n'ụlọ nka na akụrụngwa.
Maazị VoiceBunny bụ otu oke bekee! Ihe na-erughị 1 na talent 10 A nabatara ya maka ịrụ ọrụ maka ya.
Ihe niile dị na ya bụ ekpuchi maka mma site n'aka ndi otu ọkachamara Voice of Bunny.
Maazị VoiceBunny na-anapụta naanị dezie, dị njikere iji audio site na onyinye kachasị mma maka ọrụ gị.
Anyị oke ọsọ, ogo dị elu, na ọnụ ala, bụ ihe sitere na teknụzụ anyị nwere, Hare9000 ™.
Ọ bụrụ na ịchọghị ndekọ, ị akwụla ya ụgwọ, oge! Ee, Maazị VoiceBunny bụ onye na-anụ ọkụ n'obi banyere ọrụ ndị ahịa (na achịcha karọt).
Douglas Karr Monday, September 10, 2012 Sunday, September 9, 2012
Mepụta Ahụmịhe Ndị Ahịa
Gịnị na-arụ ọrụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya